ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများမှ ... - Falls Church Healthcare Center
Falls Church Healthcare Center တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတတ်နိုင်ဆုံးသနားကြင်နာသောစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖော်ရွေသော၊ ချဉ်းကပ်ရလွယ်ကူသော ၀ န်ထမ်းများရှိခြင်းနှင့်လမ်းခရီးတိုင်းတွင်မေးခွန်းများကိုဖြေကြားပေးလိမ့်မည်။ ကြည့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများရေးသားခဲ့သောအရာကိုကြည့်ပါ။
ထိုအမျိုးသမီးများထဲမှ တစ်ဦးစီသည် ပကတိသူရဲကောင်းများဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့် ကြင်နာမှုသည် ထူးချွန်ကြသည်။
ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ နွေးထွေးမှုနဲ့ ဂရုစိုက်မှုက ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကို မျှော်လင့်ထားနိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရှာဖွေနေပါက ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းတို့အား အထူးအကြံပြုလိုပါသည်၊ ၎င်းသည် စိတ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါ။
၀ န်ထမ်းအားလုံးအရမ်းကောင်းပါတယ်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်.
ကျွန်မချိန်းထားတဲ့သူတိုင်းက ချစ်စရာကောင်းပြီး ဂရုစိုက်ကြတယ်။.
ဧည့်ကြိုကောင်တာမှာရှိနေတဲ့သူနာပြုဆရာမကသူမကျွန်တော့်လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားပြီးကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရကျွန်တော်နဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။ ၎င်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီးအထီးကျန်ဆန်မှုလျော့နည်းစေသည်၊ ၎င်းအတွက်ငါသူမအားအမြဲကျေးဇူးတင်နေလိမ့်မည်။
သူနာပြုဆရာမနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်များ: မေ့ဆေးဆရာ ၀ န်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ C. သူမကိုဖုန်းနဲ့စကားပြောတာကနေသူမကိုလူချင်းတွေ့ရတာအံ့သြဖို့ကောင်းလိုက်တာ။
လူတိုင်းကအရမ်းသဘောကောင်းတယ်။ ဒါဟာနှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ပူလာတယ်၊ ရယ်တော့တာပဲ၊ သူတို့ကကြင်နာပြီးအရမ်းရယ်ရတယ်။
၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်အလွန်ဖော်ရွေပျူငှာပြီးဧည့်ခံသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည်။ ငါတရားမ ၀ င်ဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ငါတစ်ယောက်တည်းလာပေမယ့်အထီးကျန်တယ်လို့မခံစားရဘူး။ သူနာပြု/ဆရာဝန်တွေဟာငါဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတာကိုအရမ်းလက်ခံခဲ့ပြီးငါစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တယ်။
© 2022 Falls Church Healthcare Centre ။ WordPress ကို အသုံးပြု၍ အခမဲ့ပြုလုပ်ထားသည် Colibri